Media sosialy ho an'ny kariera | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 15, 2011 Alakamisy, Desambra 7, 2017 Douglas Karr
Fandaharana tamin'ny radio omaly miaraka amin'i Austin sy Jeffrey avy any Orabrush dia resaka mahatalanjona ary ny ampahany aminy dia miompana amin'ny fanabeazana. Nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite Brigham Young i Jeffrey ary nitantara ny fanabeazana nomena azy ivelan'ny efitrano fianarana amin'ny marketing amin'ny Internet. Mazava ho azy fa nahitam-bokany - ny asany tamin'ny Orabrush dia zava-mahagaga tsy nampino.
Ity infographic vaovao avy amin'ny Voltier Creative mifantoka amin'ny media sosialy ho an'ny sahan'asa:
Mazava fa hijanona eto ny fifaneraserana amin'ny haino aman-jery sosialy. Miaraka amin'ny 79% amin'ireo orinasa ankehitriny mampiasa lafiny sasany amin'ny media sosialy, nanomboka ny vanim-potoana vaovao amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny orinasa. Andraikitry ny tetikady tetikady ara-tsosialin'ny orinasa iray ny mitantana sy mandrindra izany fifandraisana izany amin'ny Internet. Rehefa mihamatotra ity endrika fifandraisana vaovao ity dia ireo mpahay tetikady ara-tsosialy no mavitrika sy manavao izay hihoatra ny fahaizany, ary ireo izay mijanona kosa mety hosoloina automatique na mahita ny maha-olona azy ireo ho tompon-tany.
Azafady mba ataovy sosialy ireo pejy fitobianao